Home / Interior design / Skandinavianina mifangaro amin'ny fomban'ny Sinoa, Suède 87m2 Mizara Trano Fankalazana!
2021 / 05 / 26 FisokajianaInterior design 7768 0
Afangaro ny rivotra avy any Avaratra
Efitrano fandraisam-bahiny roa any Suède ity, ary 87 metatra toradroa ny velarany. Sipa mpivady no nanofa azy ary nohavaozina. Ny tovovavy roa dia manintona ny endrika Nordic mamiratra sy mafana, saingy rehefa nandeha tany Chine izy ireo dia nilaza fa manintona ihany koa ny kolontsaina sinoa nentin-drazana, ka dia natosik'izy ireo tamim-pahasahiana nampiditra ireo singa sinoa tao amin'ny endrika anatiny avaratra. Mety ho somary tsy mifanaraka izy io, saingy mahafeno tanteraka ny andrasan'ny zazavavy roa ho an'ny tranony kely.
View Fijery an-dalambe
Ilay trano nohofain'izy ireo dia miorina amin'ny trano efa antitra. Niorina tamin'ny 1903 ary nohavaozina tamin'ny 2015, ary ny trano iray manontolo dia manana endrika tena mahafinaritra.
Ny rihana dia miorina amin'ny rihana fahatelo amin'ilay trano ary manana jiro mamirapiratra tokoa. Ny faritra fisakafoana sy ny lakozia misokatra dia mahatonga ny habakabaka hijery malalaka sy malalaka.
Nisafidy sofa fotsy fotsy tena faran'izay Skandinavianina ireo vehivavy miaraka amina landy malefaka sy lamba rongony, izay matetika ampiasaina ho toerana hipetrahan'ny olona roa sy hihaona.
Ny velarana fidirana miaraka amin'ny gorodona gorodaly miloko grafita mba hamerina ny vovoka, gorodona hazo volontsôkôlà manala baraka ny habaka ampahibemaso, fiparitahan'ny fotodrafitrasa Skandinavianina vaovao tsy misy sakana.
Ny sary hoso-doko eo amin'ny rindrina dia sarin'ny amperora sinoa avy amin'ny tarana-mpanjaka Ming sy Qing, ary eo an-jorony dia misy sary sokitra haingo an'ny mpiady terracotta sy soavaly. Nandeha nankany Chine ireo vehivavy taona vitsivitsy lasa izay ary lasa liana tamin'ny tantaran'ny Sinoa, ary ireo fahatsiarovana ireo dia nanaraka azy ireo namakivaky ny ranomasina nankany Suède.
Ny faritra fisakafoana sy lakozia misokatra dia manana loko miloko vaovao sy fitaovana an-dakozia tena moderina izay nahatonga ny tovovavy roa ho tia ny fandrahoan-tsakafo. Betsaka ny toerana fitahirizana, ny kojakojan-dakozia tena marani-tsaina, ary ny vata fampangatsiahana miafina ao anaty kabinetra anatiny.
Ny ahi-maitso eo am-baravarankely dia feno hazavan'ny natiora, ary ny fiainana dia toy ny tononkalo idyllic, malalaka sy miala sasatra.
Tian'ireo sipa roa hihaona amin'ny namany vitsivitsy tsy miankina amin'ny Internet, ary latabatra fisakafoana enina no azo ampiasaina matetika.
Ireo efitrano fatoriana roa dia mitovy habe ary samy manana fandriana mirefy 1.5m. Akanjo kely, rindrina fotsy tsy misy fangarony ary fanaka malefaka kely indrindra no manome fampiononana farany.
Ny fitahirizam-baravarankely misokatra dia mety kokoa, fa io koa dia mamaritra fa tsy ho kamo ny fitehirizana, raha tsy izany dia hiseho misavoritaka raha tsy mitandrina ianao.
Ny efitrano fatoriana hafa dia somary hazavana kely kokoa, ary ny fandriana mainty somary maizina kokoa ny feony, izay toa manintona be eo amin'ny toerana fotsy madio. Na izany aza, ny zavatra tsara dia tsy vitsy ny singa mainty, izay mitazona tanteraka ny fomba skandinavianina andrasan'ny tompona roa.
Ny fandroana dia misy taila fotsy madio eo amin'ny rindrina sy taila volondavenona amin'ny tany. Ny fandroana, fandroana ary fitaratra amin'ny gorodona dia efa misy. Ny efi-trano tany am-boalohany dia tena antitra, fa amin'ny fanavaozana ny sakaizany roa, ny efitrano fandroana taloha dia azo omena endrika vaovao.
Previous :: Ny fanasitranana tsara indrindra indrindra dia ny fahamendrehan'ny trano mitokana - ny endrika Gizhu Next: Scema miloko fotsy sy fotsy madio, miverina amin'ny fahatsorana sy fahadiovan'ny trano | First Space Design Chengdu